Ngwá Ọrụ Na-adịghị Ọrụ | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 29, 2009 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Douglas Karr ọ ga-abụrịrị na-abanye ụbụrụ m aka mgbe ọ na-ede ihe Esi Otu-Ọrụ. Anọ m na-eche ọtụtụ ihe banyere ihe a niile na-arụ ọtụtụ ihe, banyere otu esi esi na tidbit na tidbit na-arụ ihe karịrị otu ọrụ n'otu oge na-eche na ọ na-apụnara m oge (ma na-eme m ụdị nzuzu). Mgbe m na-ede akụkọ, akwụkwọ blọọgụ ma ọ bụ usoro atụmatụ, ana m ahapụ flotsam na jetsam nke ọdụ ụgbọ mmiri MacBook Pro na ihuenyo m dọpụ uche m tad nke ukwuu.
Naanị ụnyaahụ, ibe m Gbaara Brand Strategist, Brant Kelsey, gosiri m ngwá ọrụ nrụpụta abụọ emere iji nye mmadụ ohere ilekwasị anya ogologo oge na naanị otu ihe. Cheedị echiche. Ngwaọrụ arụpụta ihe na - akwado nlebara anya ogologo oge na otu ọrụ kama ịkwalite ebumnuche ịga-aga-aga nke ewu ewu. Nwere mmasị? Ndị ọrụ Mac, lelee ngwa ndị a:
DeeRoom - ndọpụ uche free ide gburugburu ebe obibi
Ngwa a na-eme ka ihuenyo gị dum ghọọ interface dị mfe nke na-ezobe ihe ngosi ndị ọzọ niile na nkanka mmapụta ihe ncheta na windo nkata. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ide ederede gị na mmemme, WritRoom ga - abụ ụzọ dị mma iji gbochie gị ịpị ịpị site na email gị, akaụntụ Twitter, Facebook na obere ihe ndị ọzọ nwere ike igbochi gị itinye uche na ozi a na - enye.
Mmụọ Away - akpaka na-ezochi ngwa na-adịghị arụ ọrụ
Mmụọ Nsọ na-eme ihe aha ya kwuru. Dị nnọọ ịgbanwe ntọala na-amasị gị na ngwa na-arụ ọrụ na ndabere iji zoo-adịghị arụ ọrụ ngwa windo. Echere m na ọ dị ka onye na-elekọta ụlọ na-atụtụ akwụkwọ gbajiri agbaji ma tinye akwụkwọ ndị ahụ na shelf mgbe ị na-arụ ọrụ na akụkọ gị.
Mgbe ị na-ewere Douglas ndụmọdụ igbochi awa ole na ole Mọnde iji lekwasị anya n'otu ọrụ, ikekwe ị nwere ike iji otu n'ime ngwaọrụ ndị a.
Mmelite: WordPress nwere ugbu a onyunyo mode nke ahụ na-enye gị ohere ịde ihe n’enweghị nchịkwa nchịkwa niile!
Tags: ihuenyo zuru okeotu-oruWritingederede ederede
Onye Kristian Maurer
Aug 30, 2009 na 9: 17 AM
Achọghị m ngwá ọrụ maka otu ọrụ, naanị ịdọ aka ná ntị. Gbanyụọ ma ọ bụ agbanyeghị ngwa ndị a na-enye nsogbu mgbe ịchọrọ ilekwasị anya na otu ọrụ. Ọ dị mfe ma ọ na-arụ ọrụ maka m ọkachasị mgbe m ga-ede ihe ngosi ma ọ bụ post blọgụ ma ọ bụ akwụkwọ. Na site na arụpụtaghị ihe na-arị elu mgbe ị na-alụbeghị di.
Kwesighi iche na gburugburu gị ga-achọpụta ya ma ọ bụrụ na ị na-eji oge ịkekọrịta, na-ekenye oghere oge maka otu ọrụ na mgbe ị na-eme nke a. Nke a bụ etu esi ahazi komputa n'oge ochie mgbe ụlọ ọrụ dum nwere naanị kọmputa dị oke ọnụ. Ndị ọrụ ka nwere echiche nke na-arụ ọrụ maka ha. Ihe a bụ naanị ịhọrọ oge oge ka oge nzaghachi zuru oke iji mepụta echiche a na onye ọ bụla. Dika anyi nwere otu ụbụrụ, nke a di ka ezigbo algorithm iji hazie oge m.
Aug 30, 2009 na 3:56 PM
Ọ dị ezigbo mma, Nila! Amaghịdị m na e nwere ngwaọrụ dị ebe ahụ na nke ahụ bụ ihe m hụrụ n'anya Blog Technology Blog ka ị na-enye mgbe niile. Daalụ nke ukwuu maka post a!
Aug 31, 2009 na 2: 14 AM
Christian bụ eziokwu na ihe kasị mma ngwá ọrụ maka otu-tasking bụ ụbụrụ gị. Kpachapụ anya na-elekwasị anya n’otu ọrụ bụ ihe kacha mkpa ị ga-ahọrọ mgbe ị na-arụ ọrụ.
Aug 31, 2009 na 7: 42 AM
Yeap… ekwenyere m na Onye Kraịst .. ọ bụ ụbụrụ ụbụrụ gị.
Sep 8, 2009 na 1:25 PM
Ọ nwere onye ọ bụla nwere atụnyere aro maka PC?
Ọkt 9, 2009 na 2:41 AM
Aga m akwado (dịka m mere na post m gbasara Zombies na Art nke Single Tasking) iji DarkRoom, ụdị Windows nke WritRoom.
Ọkt 1, 2009 na 6:42 PM
Obi dị m ezigbo ụtọ na achọtara m post a! 😀 M na-elekwasị anya mbipụta n'ihi na m adhd na mgbe m na online m niile ebe. Ihe kariri ngwa ole na ole na ihe kariri iri na abuo mepee. Abụ m junkie sọftụwia enwere m ike ịchọta karịa mmemme ole na ole iji nyere aka na njikwa oge, nhazi na nrụpụta ọrụ. Ana m eritekwa uru mgbakwunye firefox maka taabụ, ntinye akwụkwọ na ụdị ndị a.
Lee ụfọdụ m na-eji I
-TooManyTabs (chekwaa ọtụtụ taabụ dị ka ịchọrọ ahịrị ahọpụtara, ahịrị ndị a na-akparaghị ókè)
-TabFocus (tụọ ọ bụla taabụ na taabụ ga-emepe)
-InstaClick (rt pịa URL ọ bụla ma mepee na taabụ ọzọ-ọ na-arụkwa ọrụ na gmail mana ọ bụghị Thunderbird)
-RemoveTabs (emechi taabụ n'aka ekpe, aka nri)
-AddThis (rt pịa ma gbakwunye url ọ bụla n'ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ-dị ukwuu maka tweeting)
Daalụ maka ọdịnaya bara ezigbo uru ma baa uru. Abụ m onye debanyere aha na onye na-eso ụzọ!